चुनावले मूल्यवृद्धिमा थप चाप «
स्थानीय तहको चुनावले मूल्यवृद्धिमा थप चाप पार्ने अर्थविद्हरुले बताएका छन् । निर्वाचनमा भएको औपचारिक तथा अनौपचारिक खर्चले मुद्रास्फीतिमा थप असर गर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चैत महिनामा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.२८ प्रतिशतले रहेको उल्लेख छ, जुन अघिल्लो महिनाको भन्दा पनि बढी हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुन महिनामा ७.१४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको थियो । विभिन्न कारणले अहिले नै बढिरहेको मुद्रास्फीतिलाई चुनावले थप प्रभावित बनाउने अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।
“चुनाव र चुनावी खर्चले मानिसहरुको वस्तु तथा सेवाको माग बढाउँछ । त्यसले मूल्यमा थप चाप पर्ने देखिन्छ । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ,” उनले भने । यसले गरिब तथा विपन्न नागरिकहरुमा ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने उनको तर्क छ ।
साथै चुनावमा भएको खर्चले आयात बढाउँदा भुक्तनी सन्तुलनमा समेत चाप पर्ने खनाल बताउँछन् । “आयातमा कडाइ गरिए पनि खासै त्यसको नतिजा देखिएको छैन,” उनी भन्छन्, “चुनावमा ठूलो रकम चलायमान हुँदा आयात बढ्न गई विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं भुक्तानी सन्तुलनमा थप प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।”
त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा. रेशम थापा चुनावी वर्षमा चुनावकै करणले १ देखि २ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि हुने गरेको बताउँछन् । स्थानीय तहको चुनावमा १ खर्ब भन्दा बढी पैसा चलायमान हुने देखिएको बताउँदै उनले मुद्रास्फीतिलाई थप उकास्ने तर्क गरे । “चुनावमा १ रुपैयाँ औपचारिक खर्च हुँदा ४ रुपैयाँ अनौपचारिक खर्च हुने गरेको देखिन्छ । २० अर्ब रुपैयाँको सरकारी खर्च हुँदा ८० अर्ब अनौपचारिक खर्च हुने देखिएकाले स्थानीय चुनावले मात्र १ खर्ब रुपैयाँ चलायमान हुने देखिन्छ,” उनले भने । एकै त्रैमासिकमा १ खर्ब खर्च हुँदा केही तरलता बढे पनि मूल्यवृद्धिमा त्यसको नराम्रो असर पर्ने थापाको तर्क छ ।
चुनावको समयमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन कम हुुँदा पूर्ति पक्षमा चाप बढ्ने तथा मानिसहरुको हातमा सजिलै पैसा पुग्दा पैसाको मूल्य कम भई मुद्रास्फीति बढ्ने उनी बताउँछन् । साथै संरचनागत मुद्रास्फीतिको चाप समेत पर्दा समग्र मूल्यवृद्धिमा दबाब सिर्जना हुने थापाको तर्क छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले चैतमा थोक मुद्रास्फीति १४.४२ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ । ढिलोचाँडो थोक मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने भएकाले दोहोरो अंकको मूल्यवृद्धि हुने थापा बताउँछन् । चुनावपछि मूल्यमा थप प्रभाव पर्ने भए पनि गरिब तथा विपन्नमा मूल्यवृद्धिको चाप अहिले नै परिसकेको उनको तर्क छ । “राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार अहिले नै तराईमा ७.६१, पहाडमा ७.७९ तथा हिमालमा ८.२५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि चैतमा नै देखिएको छ । ठूलो जनसंख्या बस्ने उपत्यकामा ६.२५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति भएकाले समग्रमा ७.२८ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि देखिएपनि अहिले नै गरिबलाई हिट गरिसकेको छ । यसमा चुनावले आगोमा घिउ थप्ने काम गर्छ,” थापा भन्छन् ।